साम्राज्ञीलाई भुवनले दिए कडा जवाफ – ‘जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने – live 60media
साम्राज्ञीलाई भुवनले दिए कडा जवाफ – ‘जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने
काठमाडौं पछिल्लो समय अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा शेयर गरेको एक भिडियोले निकै चर्चा पाएको छ । उनले उक्त भिडियोमा फिल्ममा भोगेको अनुभव बताएकी थिइन् । उनले उक्त भिडियोमा फिल्म क्षेत्रमा निर्मातारनिर्देशकले अपशब्द बोल्ने गरेको बताउकी थिइन् ।
उनको उक्त भनाईप्रति आइतबार बेलुका अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशक भुवन केसीले आक्रोश पोखेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।
उनले फेसबुकमा लेखेका छन् – खान नपाएको भन्दै सामाजिक सन्जालमा रोई कराई गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छिन् ? जुन थालमा खाने त्यही थालमा दुलो पार्ने । सामाजिक सन्जालमा गर्ने बराबर अभिनय फिल्ममा पनि गरे हुने नी !’
यसअघि अभिनेत्री साम्राज्ञीले एक भिडियोमा भनेकी थिइन् – १७ बर्षको उमेरमा चलचित्रमा डेव्यु गरे। त्यो बेला धेरैले हाम्रो क्षेत्र सानो छ कति कुरा बाहिर निकाल्नु हुन्न, भन्नु हुन्न भन्थे। काम नपाउने, चलचित्र नै नपाउने जस्तो कुरा पनि गर्थे। हरेक चलचित्रको प्रमोशनमा जादा सोधिने किन घमण्डी, किन मान्छेले घृणा गर्छन् लगायतका प्रश्नले दिक्क हुन्थे। मैले जति पनि व्यानरसंग काम गरे त्यो मध्ये धेरैसंग काम नदोहोरिनुको कारण उहाहरुले मलाई गर्ने व्यवाहार नै हो। एउटा कलाकारले पाउनु पर्ने सानो सम्मान सम्म यहा पाइदैन । कति पटक ह्यारेश्मेंट हुन्थ्यो। तर पनि त्यो सब कुरालाई जोक जस्तो मानेर मुहारमा हासो ल्याएर काम गर्नुपर्थ्यो। ‘
कतिसम्म भयो भने समयमा खान र पानीको व्यवस्था नहुदा यसको बारेमा बोल्यो भने सवैको अगाडी अपशब्द प्रयोग गरेर बोलिन्थ्यो। आक्रमण गर्ने शैलीमा आउथे, धेरै बेर रुन्थे अनि केहि नभएजस्तो गरेर फेरी मेकअप गरेर सुटिङ्ग ज्वाइन गर्थे किनकि मलाई काम संग प्रेम छ, कामको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाह छ र मैले सकेको १०० प्रतिशत भन्दा बेसी मेहनत लगाएर नै काम गर्थे।
एउटा यस्तो नमिठो अनुभव पनि मैले भोगेकी छु कि एक चलचित्रमा मैले साईन गरे। उहाको बानि व्यवहार र उहाको रुष्टपनलाई लिएर धेरै चर्चा हुने गर्दथ्यो। तर पनि मलाइ उहा त्यस्तो लाग्दैनथ्यो। तर जब चलचित्रको काम सुरु भयो मेरो विस्वास एकैपटकमा टुट्यो।
काम गरेको व्यानरबाट फेरी अफर नआएको हैन तर मैले फेरी त्यहि टिमसंग काम गर्ने आँट नै गरिन्। यस्तो बिषयमा धेरै खुलेर कुरा गर्न खोज्नुहुन्न अनि चलचित्र मेकरहरु पनि यस्तो कुरा बाहिर नाओस भन्ने चाहनुहुन्छ तर यस्तो नाओस भन्ने सोच्ने मान्छेले कलाकारलाइ थोरै भए पनि सम्मान दिन सक्नु भएको भए पनि त हुन्थ्यो। यस्ता कुरा धेरै पहिलेबाट बोल्न चाहन्थे तर एकजना चलेको निर्देशकले तिमि चलेको अभिनेत्री हौ यस्तो कुरा गर्नु राम्रो हुन्न समेत भन्नु भयो।
मलाई थाह छ यो सव बोलेपछि मैले अझ धरै घृणा पाउछु होला अथवा माया पनि पाउन सक्छु तर यो बोल्न आवश्यक थियो। घृणापाउने नकारात्मक प्रतिक्रिया पाउने त बानी भैसक्यो मलाई। यी सबै कुरा म डिटेल्समा भन्न चाहन्छु तर लाग्दैन यो सबै कुरा भन्न सक्छु होला । अथवा यी सवै कुरा भन्दा नराम्रो इमेज पनि बन्छ होला म त्यो कसैको होस् भन्ने चहान्न।’
← सोमवारको दिन गर्नुस् यी पाँच काम, यसरी गर्नुस भगवान शिवको पूजा आरधना।
९ महिनाको बच्चालाइ एउटा कोठामा सुताएर अर्को कोठामा गरे दम्पतीले आत्महत्या, आत्महत्या गर्नु अघि बहिनीलाई गरेको त्यो मासेज जसले बनायो झनै भावुक ! →